Zvinyorwa zvaFarah Kim pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Farah Kim
Vatengesi vari pasi pekumanikidzwa kwakanyanya kuti vafambiswe nedata. Asi, hauzowana vatengesi vachitaura nezvehurombo hwemhando yedata kana kubvunza kushomeka kwekutonga kwedata uye muridzi wedata mukati memasangano avo. Pane kudaro, vanoedza kuve data-inofambiswa ne data rakashata. Njodzi dzinotyisa! Kune vazhinji vatengesi, matambudziko akaita sedhata isina kukwana, typos, uye duplicate hazvitombo zivikanwa sedambudziko. Vaizopedza maawa vachigadzirisa zvikanganiso paExcel, kana kuti vangave vachitsvaga maplugins ekubatanidza data